Indlela yokuphucula i-Amazon SEO yakho?
Ngokwe-data ye-statistical, ngaphezu kwe-55% yabasebenzisi abakhetha ukwenza ukuthengwa kwe-intanethi, vula kwi-platform ye-Amazon yokurhweba ukufumana oko bakufunayo. Ingongoma yokubhekisela kubathengi kwiintsuku zethu. Abasebenzisi bajonga eli qonga kuqala ngenxa yenani lezizathu ezicacileyo ezifana nobuhle obuhle beli sayithi, ukukwazi ukuthelekisa amaxabiso nokufumana ixabiso elilungileyo kwiwebhu, amandla okufunda ukuxhaswa kwabathengi, kwaye njalo. Ngaphezu koko, abasebenzisi bayazi ukuba kwimeko yokungahambi kakuhle kweli qonga, baya kufumana umvuzo opheleleyo. Zonke ezi zinto zenza i-Amazon inenzuzo kubo bobabini abathengi kunye nabathengisi. Yingakho ukuba ungathanda ukujolisa inani elikhulu labathengi bakho, i-Amazon iyona yindawo efanelekileyo yokulungiselela ezi njongo. Ukuze ukwazi ukufumana uluhlu oluthe xa uluhlu lwakho kule shishini lokurhweba, kuya kufuneka ufezekise ezinye iindlela zokucwangcisa injini yokukhangela ukubonisa iimveliso zakho kunye nezoshishino.
Eli nqaku lenzelwe ukukunceda ukuphucula i-Amazon SEO yakho kwaye wenze iimveliso zakho zibonakala kule ndawo enkulu.
Umgaqo wemveliso usezingeni eliphezulu kwi-Amazon
Kukho izinto ezibalulekileyo zokubeka izinto ezifunekayo ukubeka isenzo ukuphucula ikhasi lakho le-Amazon SEO. Ukuba ungathanda ukudala uluhlu lwemveliso elungileyo, kufuneka ukwazi ukuba yiziphi iinkalo ofuna ukuzigxila kuzo.
Ngokutsho kwe-Amazon A9 ukulungiswa kwe-algorithm, umthengi onokubona ubona idatha elandelayo emva kombuzo wophando:
ejoliswe kumagama angundoqo kunye namathegi;
ukufumaneka kwemveliso (okwangoku kufumaneka okanye kusekho);
Yonke le miba inokuhlulwa kwizinto zokusebenza kunye nemibandela. Iqela lokuqala lezinto libonisa ukuba ama-Amazon ayisebenzisela ntoni ukubeka iimveliso ezixhomekeke kwimali engayenzayo ngokwenza njalo. Imilinganiselo yokubaluleka yinto ehambelana nemveliso emva kokukhangela komsebenzisi.
Masiqale sixoxe ngeendlela ezisemgangathweni zendlela yokusebenza. Okokuqala, kukho izinga lokuguqulwa. Ukuguqulwa kubonakala kwiinkalo ze-Amazon. Unokusebenzisa amaqhinga amaninzi asebenzayo ukubonisa i-Amazon yakho imveliso iguqula kakuhle. Xa kuziwa ekufumaneni umfanekiso ocacileyo wokuguqulwa, ama-Amazon akakhohlisi. Ungakwazi ukujonga amathrikhi ahlukeneyo njengamaqumrhu kunye neeseshoni, kodwa akukho idatha eyaneleyo yokulawula yonke imeko.
Unokufumana idatha yakho yokuxoxa ngokuya kwiiNgxelo, ngoko ingxelo zeBusiness, Ukuthengisa okugqithiseleyo kwiphepha kunye ekugqibeleni iThuthi. Apha kufuneka uhlolisise ipesenti zeseshoni okanye ngamanye amagama inani leeseshoni.
Ukuphucula i-Amazon rankings, kufuneka ulungelelanise ipesenti yakho yokuthenga ibhokisi. Ngokomzekelo, iiyunithi zakho ziyalelwe ngebhokisi lokuthenga liza kubonisa i-Amazon ukuba uguqula ngaphezulu.
Unokuchaphazela usetyenziso olusekelwe kumsebenzi ngokuphucula imifanekiso kunye nokuphuculwa kwexabiso lomkhiqizo.
Ngoku, makhe sijonge kwi-Amazon usetyenziso lwezinto ezixhomekeke kwimpumelelo. Imiba yokubaluleka kwayo yonke into malunga nokufaneleka kombuzo wophando kunye nolwazi olunikezwa kwiphepha.
Ukwenza ukuba iphepha lakho lihambelane nombuzo womsebenzisi, kufuneka ulungiselele isihloko sakho somxholo. Kufuneka uquke amagama angundoqo afanelekileyo nakwizinto ezijoliswe kwisihloko sakho kunye nenkcazo ekuncedeni abathengi bakho abafumana iimveliso zakho kwiphepha.
Izinto ezibalulekileyo ozifunayo ukuzifaka kwisihloko sakho ngumkhwa womkhiqizo, inkcazo emfutshane (umbala, ubungakanani, ubuninzi, ubuninzi), umgca wemveliso kunye nale mveliso (abantwana, abadala, njl Source . )